Beesha caalamka Q/midoobey iyo kooxda madasha higsiga 2016 oo shir u socdey soo gaban gabeeyey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com Beesha caalamka Q/midoobey iyo kooxda madasha higsiga 2016 oo shir u socdey...
Beesha caalamka Q/midoobey iyo kooxda madasha higsiga 2016 oo shir u socdey soo gaban gabeeyey.
Shirkii todobaad ee madasha wada-tashiga Somalia iyo dalalka iyo hay’adaha caawiya Somalia ee HPLF ayaa lagu soo Gunaanaday Muqdisho gellinkii dambe ee maanta.
Dhanka amniga waxaa lagu soo bandhigay shirka warbixinno la xiriirta fulinta barnaamijka Guul-wade, Hir-gelinta barnaamijka Heegan, is-waafajinta labada barnaamij ee Guul-wade iyo Heegan iyo weliba xoojinta hawlgallada milatariga ee dalka ka socda.
Previous articleQeyb kamid ah Barlamaanka maamul goboleedka K/G oo la dhaariyey.
Next articleDawlad goboleedka Jubbaland oo ugu baaqdey Puntland in ay aqoonsato M/G deriska la ah eeG/mudug.